Home News DEG DEG: Bosaaso waxa lagu weereray ciidanka ilaalada Madaxweyne Gaas.
DEG DEG: Bosaaso waxa lagu weereray ciidanka ilaalada Madaxweyne Gaas.
Warar deg deg ah oo ay MOL ka heshay magaalada BOSAASO ayaa sheegaya in halkaas lagu weereray Ciidanka ilaalada Madaxweyne Gaas, dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta. Wixii soo kordha gadaal ayaan idinkaaga soo sheegi doonaa
Previous articleHadii amarkiisii cid qaadanaysaa jirin, Maxamed C. Farmaajo yuu Madaxweyne u yahay?
Next articleLabo askari oo ka tirsan ciidanka MW Cabdiwali Gaas oo lagu dilay Boosaaso
Xisbigga Ex-madaxweyne Xassan Shiikh oo loo diiday in uu qabsado Siminaar...